'एकाधिकार' तोडिएकै हो त सरकार ? - Everest Dainik - News from Nepal
‘एकाधिकार’ तोडिएकै हो त सरकार ?
काठमाडौँ, असोज ९ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले तोडियो भनेको एकाधिकारले फेरि मन्टो उठाएकोमा सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
कागजमा यातायात एकाधिकार तोडिए पनि व्यवहारमा यथावत् रहेकाले अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छनु ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसद गौरीशंकर चौधरीले अन्त्य भयो भनिएको यातायात एकाधिकारको वास्तविक रुप दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङका बेला छर्लङ्ग भएको बताए ।
टिकट बुकिङकै दिन सकियो भनेपछि महँगोमा बेच्ने चलन रोकिनुपर्ने उनको भनार्इ थियो । सांसद गणेश पहाडीले चाडपर्वमा हुने गरेको यातायात अव्यवस्था हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गरे । पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षमा पनि नसकिएकाले समयमै सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले यातायात व्यवसायीले दशैँको अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयलाई एकाधिकारको लेनदेनका रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले ‘हटी सक्यो भनिएको एकाधिकार अन्त्य नभएको दशैँको मुखमा प्रमाणित भएकाले’ मन्त्रालयसँग ठोस कार्ययोजना माग गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले यातायात क्षेत्रमा भएको बेथितिले घण्टौँ जाममा बस्नुपर्दा समिति बैठकमा आउनै ढिला भएको गुनासो गरे । समितिमा निर्माण व्यवसाय कम्पनी खोलेका सांसदलाई नराख्न पनि उनले माग गरिन् ।